INanchang Micare Medical Equipment Co., LTD
Izibani eziduduzayo zokwenza umhlaba ube indawo engcono
Ukuqamba, inhlonipho, win-win, umthwalo, ukubonga. Yenza izibani zezokwelapha ezingcono
INanchang Micare Medical Equipment Co., LTD ibhizinisi elisha nobuchwepheshe obuphakeme, sitholakala eNanchang National High-Tech Development Zone. Sihlala sigxila ekwakhiweni nasekwakhiweni kwamalambu ezokwelapha. Imikhiqizo yethu eyinhloko imboza ama-Operating Ligths, Izibani Zokuhlolwa Kwezokwelapha kanye Namalambu Ezokwelapha, njll. Uhlobo lokukhanyisa jikelele lwe-LED Operating Light olucwaningwe futhi lwakhiwa yithi selufinyelele ezingeni eliphakeme lomhlaba, futhi selivele lawina amalungelo obunikazi kazwelonke, sesibe yinto emisha umholi embonini yamalambu e-medica. Isitifiketi esitholakele sine-ISO13485, CE, isitifiketi sokuthengisa samahhala nokunye.
IMicare izinikele ukuhlinzeka ngemvelo yokusebenza ephephile, enempilo nenethezekile kubo bonke ababambiqhaza bemboni yezokwelapha, besebenzisa impumelelo yakamuva yesayensi nobuchwepheshe, ulwazi lobuchwepheshe emkhakheni wezokwelapha, kanye nokuqamba okuqhubekayo, ukukhiqiza ukonga okuluhlaza namandla, umkhiqizo ophephile nosebenzayo, futhi wakhe inani elikhulu lokuthuthuka komphakathi.
Le nkampani ineqembu labasebenzi abaqeqeshiwe kakhulu. Sigxila ekusebenzeni kwemibono yobuqotho, ubuchwepheshe kanye nokusebenza. Ngaphezu kwalokho, injongo yethu yokwenza amakhasimende aneliseke, okubhekwa njengesisekelo sokusinda. Sizinikezele ekuthuthukiseni inkampani yethu kanye nomsebenzi wokukhanya. Mayelana nemikhiqizo, sinikela ngokuzibophezela kwekhwalithi ephelele kumakhasimende ethu ngesiqinisekiso sekhwalithi yokufinyelela izisekelo zethu zamakhasimende eziqondiswe kanye nekhwalithi kuqala. Okwamanje, siyabonga kumakhasimende ethu amasha nalawo ajwayelekile athemba imikhiqizo yethu. Sizophinde senze ngcono imikhiqizo yethu ekhona kanye nezinsizakalo, futhi sibambe ukuthambekela kwakamuva kwentuthuko yezobuchwepheshe ngalesi sizathu. Sizobeka umzuliswano omusha wentuthuko yezobuchwepheshe emisha ukuze sinikeze imikhiqizo engcono nezinsizakalo zobuchwepheshe kubasebenzisi bethu. IMicare ikakhulu ikhiqiza isibani sesithunzi sokuhlinzwa, ukukhanyisa okusizayo okuhlinzekwayo, isibani sekhanda lezokwelapha, ingilazi yokukhulisa yezokwelapha, umthombo wokukhanya wezokwelapha obandayo nezinye izinhlobo.
NgoJuni 2011, iMicare yasungulwa ngokusemthethweni futhi yaba nguMenzi Wokukhanya Kokuhlinzwa Kwezokwelapha esifundazweni saseJiangxi.
Ngo-2014, isibonakaliso se-LED Esijwayelekile esikhanyayo sathola umklomelo wesibili we-Jiangxi Excellent New Product.
Kusukela ngo-2015 kuze kube manje
Kusuka ku-2015 kuze kube manje, inkampani manje inemikhiqizo eyinhloko efana nokukhanya kwezokwelapha okuhlinzekwa, amalambu okuhlolwa kwezokwelapha, imithombo yamakhaza ebandayo yezokwelapha, amalambu ezokwelapha, njll., Futhi ibambisene nezibhedlela eziningi ukukhulisa izimakethe zasekhaya nezangaphandle, futhi zibambe iqhaza ezinhlobonhlobo imibukiso yezokwelapha ekhaya nakwamanye amazwe izikhathi eziningi futhi yazuza indumiso ngazwi linye kumakhasimende.
ukukhanya kwe-wall mount light, Isibani Samazinyo, Ukuhlolwa Kwezokwelapha, Kwaholela Headlight Okuhlinzwa, I-Halogen Lamp Ye-Biochemical Analyzer, Halogen Examination Lamp,